प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार बदर, सातै प्रदेशका संयोजक तोकियो, कुन प्रदेशमा को ? - Himali Patrika
प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार बदर, सातै प्रदेशका संयोजक तोकियो, कुन प्रदेशमा को ?
हिमाली पत्रिका ९ पुष २०७७, 5:48 pm
काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी निर्णयबाट दिइएको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ । ‘उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन तर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकाले उहाँको कार्यकारी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
ओली पक्षले बिहीबार नै विधानमा पनि प्रथम अध्यक्ष (ओली) मात्रै हस्ताक्षर चल्ने गरी संशोधन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेको छ ।
यस्तै बैठकले सातै प्रदेशमा पार्टी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम संयोजक लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, वागमतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश १ मा सुवास नेम्वाङलाई संयोजक तोकिएको छ ।
ओली पक्षद्वारा संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको छ । स्रोतका अनुसार बिहीबार आयोगमा दर्ता गराइएको संशोधनमा पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज र पत्रहरुमा प्रथम अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर ‘चल्ने’ बनाइएको छ । यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधित विधानबाट दुई अध्यक्ष रहने प्रावधान भने हटाइएको छैन । त्यस्तै केन्द्रीय समितिको संख्या पनि ओली पक्षले निर्णय गरेर पुर्‍याएको १११९ लाई कायम गरिएको छ । ओली समूहले मंगलबार नै निर्वाचन आयोग पुगेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको जानकारी दिएको थियो । दाहाल–नेपाल समूहले बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको एउटा खेमा र पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल नेतृत्वको अर्को खेमा दुवैले आफूहरुलाई आधिकारिक नेकपा दावी गरिरहेका छन् ।